Ny Vesta Team FC, izay ekipa mbola tsy resiny mihitsy hatramin’izay, no hifanadrina amin’izy ireo amin’izany. Tafiditra ao anatin’ny andro fahefatra ha na’ny fifaninanan’Analamanga izany. Ny roa amin’ireo lalao efatra vitan’ireo klioba sasany ihany aloha hatreto no mbola natrahan’ny ekipan’ny La Pimprenelle Andoharanofotsy. Faharesena iray teo antrehan’ny Ajesaia (2-1) sy fandresena iray nanoloana ny AS Saint Michel (1-0) no manome isa telo ho azy ireo amin’izao.
Lalao fahefatra kosa ho an’ny Vesta Team FC no hatrehany amin’ny sabotsy. Raha ny vokatra ho azy ireo dia mila ezaka mafimafy ihany mba hialana amin’ny isa tokana. Faharesena roa nanoloana ny Japan Actuel’s (2-1) sy Ajesaia (2-1) miampy ady sahala iray tamin’ny lalao’izy ireo sy ny Dartline FC (0-0) no azon’izy ireo hatramin’izao, ka hipetrahany eny amin’ny faritra mane ho an’ireo ekipa folo mandray anjara amin’io fifaninana io.
Milahatra aorian’io lalao io ny fifanandrinana eo amin’ny Ajesaia, izay manan ias 6, sy ny Iarivo Football Club (isa 2).